အယ်ဒီဆင်ကြီးတောင် အရှုံးပေးသွားရမယ့် ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့အလန်းဇယား တီထွင်မှုတွေပါ
ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ အလန်းဇယားတီထွင်မှုတွေ ကြည့်ကြမယ်
24 May 2017 . 5:31 PM
ဂျပန်နိုင်ငံကတော့ တီထွင်မှုအပိုင်းမှာ အနောက်နိုင်ငံတွေကိုတောင် အားကျမခံပါပဲ။ သာမန်လူတစ်ယောက် စိတ်ကူးထဲမှာတောင် မတွေးဖူးတဲ့အကြောင်းအရာတွေကို လက်တွေ့အကောင်အထည်ဖော်တတ်တဲ့ အကျင့်ကိုတော့ ချီးကျူးမိပါတယ်။ ဂျပန်နိုင်ငံသားတွေရဲ့ တီထွင်ချက်တွေကို အယ်ဒီဆင်များ တွေ့လိုက်ရင် အံ့သြသွားမယ်လို့တောင် ထင်ပါတယ်။ ဘာတွေများ တီထွင်လိုက်တာလဲ။
၁။ မေးထောက်တုတ် (Metro Chin-Stick)
ဂျပန်နိုင်ငံမှာက မြေအောက်ရထားတွေ ဘာတွေ စီးတဲ့အခါမှာ ငိုက်တတ်ရင် ကြမ်းပြင်ပေါ်မှာ ပြိုလဲသွားမှာစိုးလို့ ထောက်ထားတဲ့ တုတ်လေးပါ။ ကိုယ်တွေ YBS စီးရင်လည်း အသုံးဝင်မယ်ထင်တယ်နော်။ ကားစီးရင်၊ ရထားစီးရင် ငိုက်တတ်တဲ့ ကိုကိုမမတွေ Metro Chin-Stick လေး မြန်မာနိုင်ငံကို ရောက်လာရင် ဝယ်ဖြစ်အောင် ဝယ်ထားနော်။
၂။ နေရောင်ခြည်သုံး မီးခြစ် (Solar Energy Lighter)
ဆေးလိပ်သမားတွေ မေ့တတ်၊ ပျောက်တတ်တာက မီးခြစ်လေ။ တစ်ခါတလေ ဆေးလိပ်ဖိုးထက် မီးခြစ်ဖိုးက ပိုကုန်တယ်။ မီးခြစ်မေ့တတ်တဲ့ ဆေးလိပ်သမားတွေအတွက် နေရောင်ခြည်သုံး မီးခြစ်ကို တီထွင်လိုက်ပါတယ်။ အလန်းဇယားပဲနော်။
၃။ ဆံပင်ဖုံးစက် (Hair Cover)
ဆံပင်ရှည်တဲ့ မမတွေအတွက် ခေါက်ဆွဲစားတဲ့အခါ ပန်းကန်ထဲကို ဆံပင်တွေဝင်နေရင် အဆင်မပြေပါဘူးနော်။ ဂျပန်နိုင်ငံက တီထွင်သူတွေက ခေါက်ဆွဲစားတဲ့အချိန်မှာ ဆံပင်တွေ ရှေ့မကျလာအောင်လို့ ဆံပင်ဖုံးစက်ကို တီထွင်လိုက်ပါတယ်။ ပန်းကန်ထဲမှာ ဆံပင်တွေမကျတော့ဘူးနော်။
၄။ ထီးနက်ကတိုင် (Umbrella Necktie)
အနောက်တိုင်းဝတ်စုံကြီးကို အခန့်သားဝတ်ထားပေမယ့် မိုးရွာလိုက်တဲ့အခါ တစ်ကိုယ်လုံးစိုရွှဲသွားတဲ့အခါ အဆင်မပြေဖြစ်တာမျိုး ကြုံဖူးမှာပါ။ အဲဒီတော့ နက်ကတိုင်လိုမျိုးလည်း တပ်လို့ရသလို ထီးလိုမျိုးလည်း အသုံးပြုလို့ရမယ့် ထီးနက်ကတိုင်လေးကို ဂျပန်နိုင်ငံမှာ တီထွင်လိုက်ပါတယ်။
၅။ လက်အတု (Hand Chopper)
မီးဖိုချောင်ထဲမှာ အခန့်မသင့်ရင် ဓားရှတတ်တာက အိမ်ရှင်မတွေအတွက် ထုံးစံလိုတောင် ဖြစ်နေပါပြီ။ လှီးစရာ ဖြတ်စရာတွေလည်း အချိန်မီပြီး ဓားမရှစေဖို့ ဂျပန်ပညာရှင်တွေက လက်အစားထိုးစက်တစ်မျိုးကို ထုတ်လုပ်လိုက်ပါတယ်။ အလွယ်လေးပါပဲ။
မျက်စဉ်းခပ်တဲ့အခါ မျက်လုံးထဲကို အပြည့်မဝမဝင်ဘဲ ဘေးကို ဖိတ်စင်သွားရင် အလေအလွင့်ဖြစ်ရပါတယ်။ မျက်စဉ်းကတော့ကို သုံးမယ်ဆိုရင်တော့ ဘေးကို ဖိတ်စရာအကြောင်းမရှိတော့ပါဘူး။ အသာအယာပါပဲနော်။
ခရီးသွားတုန်း မိုးရွာလာမယ်ဆိုရင် မိုးလည်း မစိုဘဲနဲ့ မိုးရေလည်း ရအောင်လုပ်နိုင်မယ့် ထီးတစ်မျိုးကိုလည်း တီထွင်ထားပါသေးတယ်။ ထီးကလေးကို ဆောင်းရင်း မိုးရေခံလိုက်ပါစို့။
ခေါက်ဆွဲပြုတ်တွေ သောက်တဲ့အခါ အငွေ့တထောင်းထောင်းဖြစ်နေလို့ ဗိုက်ကလည်း ဆာလှပြီ၊ ခေါက်ဆွဲပြုတ်ကလည်း ပူသေးတဲ့အခါ ထိုင်စောင့်နေရတာလည်း တစ်ဒုက္ခပါပဲ။ အဲဒီတော့ ဒီစက်နဲ့ဆိုရင် ခေါက်ဆွဲပြုတ်ကိုလည်း စားရင်း အအေးလည်း ခံရင်း။
အဖော်မဲ့နေတဲ့ FA မမတွေပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ရည်းစားမရှိသေးတဲ့ Single ခေးတွေပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ဟောင်းနွမ်းနေတဲ့ အပျိုကြီးမမတွေပဲဖြစ်ဖြစ် ယောက်ျာတစ်ယောက်ရဲ့ နွေးထွေးတဲ့ရင်ခွင်တစ်စုံမှာတော့ မှေးစက်ချင်စိတ် ဖြစ်ဖူးကြမှာပါ။ ရင်ခွင်ထဲမှာ မှေးစက်ရင် စိတ်ကူးယဉ်လို့လည်း ကောင်းမှာပေါ့။ ဒီစက်လေးများ မြန်မာနိုင်ငံကို ရောက်လာရင် လက်မလည်ဘူးထင်ပါရဲ့။
အချစ်ကြီးတဲ့ လူပျိုကြီးတွေကတော့ မိန်းမလှလေးရဲ့ ပေါင်တံဖွေးဖွေးကို ခေါင်းခုပြီး အိပ်လိုက်ရရင်ဖြင့် “ကဗ္ဗလာ ကော်ဇော” ပေါ်မှာ ကွေးလိုက်ရသလို စည်းစိမ်ရှိလှမယ်ထင်ပါတယ်။ နွေးအိနေတဲ့ ပေါင်တံပေါ်မှာ ခေါင်းခုရင်း အတွေးယစ်မူးလိုက်မယ်ဆိုရင် . . . . . . . (ဟီဟီ ဆက်မရေးတော့ဘူး)။ မြန်မာပြည်ကို ရောက်လာရင် ကိုကိုတွေ ပြေးဝယ်မှာသေချာပါတယ်။
ကဲ . . . . ဂျပန်နိုင်ငံကတော့ သြချလောက်တဲ့ တီထွင်မှုတွေနဲ့ လူစိတ်ဝင်စားမှု အရယူလိုက်ပါပြီ။ အခုဖော်ပြထားတဲ့ ပစ္စည်းတွေ မြန်မာနိုင်ငံကို ရောက်လာရင် ဘယ်ပစ္စည်းကို အရင်ဆုံးဝယ်မှာလဲ။ ကိုယ်နဲ့ဘယ်ပစ္စည်းက သင့်တော်တာလဲဆိုတာ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးရင်ဖွင့်သွားဦးနော်။